Deg Deg:Odayaasha Laascaanood Iyo Xubno Hargeisa Laga Soo Diray Maxaa Kala Qabsaday, | khaatumonews
Deg Deg:Odayaasha Laascaanood Iyo Xubno Hargeisa Laga Soo Diray Maxaa Kala Qabsaday,
Jun 13, 2018 - 4 Aragtiyood
Gudi u badan hor joogayaasha ka soo jeeda gobolka Sool maalmihii ugu dambeeyey ku sugnaa magaalada Laascaanood ee xarunta gobolka Sool ayaa lagu soo waramayaa inay waji gabax kala kulmeen odayaasha dhaqanka.
Mid kamid ah howl wadeenada Khaatumo news oo ku sugan Laascaanood ayaa waxa uu xaqiijiyey in odayaasha dhaqanka ee gobolka Sool gaar ahaan Laascaanood ay si cad u diideen qorshihii gudiga ka socda Soomaaliland ee ku sugnaa Laascaanood
Odayaasha dhaqanka ayaa diidey inay guud ahaanba wax shirar ah la qaataan madaxda ka socda maamulka Soomaaliland oo ay sheegeen inay yihiin shaqsiyaad sharaftoodii shilimaad aan sii jiri doonin dhaafsaday.
Waxa ay sheegeen in xiisadda dagaal ee ka soo cusboonaatay gobolka Sool iyo dhibaatada Soomaaliland ay ka waddo gobolka Sool ay sabab u noqon kadho dagaal waayo badan laga sheekeeyo oo Soomaaliland ay kala kulanto gobolka Sool.
Hor joogayaasha Muuse Biixi u soo diray Laascaanood ayaa ujeedkoodu ahaa sidii ay shacabka gobolka Sool gaar ahaan magaalada Laascaanood taageero u siin lahaayeen Soomaaliland.
😀😀😀😀 Web 🕸 Kastuumo oo qirtey in SOOL SOMALILAND tahay waar talow yaa muslimiyay munaafiqiintii wax ku soo malmalluuqi jirtay?!!!.
Ku lahaa : Guddi u badan Horjoogayaasha ka soo jeeda Gobolka Sool ee SOMALILAND oo maalmihii ugu dambeeyay ku sugnaa magaalada Laasaanood ee xarunta Gobolka Sool SOMALILAND ayaa lagu soo waramayaa in odayasha dhaqanku Si fiican u soo dhaweeyeen.
lafaruugaawi intasa ku qanacdey waxu ka wada gudi somalind ah oo laaska timid somalind danbe ma maqlaysid mar labad baa la rushaynaya sidu adeerkey u rusheeyey allow u naxariiso siyaad bare geesigii daarood ismaaciil
KHAATUMO NEWS QOFKII MAQAALKAN SOO QORAY WAA KUMA? IIDDOOR KIIBUU NOO JEBIYEE IDIOTIC MANTELY MOTHER FUCKING KU MAAHA DOQMO DAAROOD ISKU XAAREE MA DURRIYADIIBAA?!!.
Daawo siyaasiga caanka ah ee reer Laascaanood ee Xasan Geerash oo baaq cuslus hawada u soo mariyey dadka nabadda iyo horumarka jecel ee reer Laascaanood si ay iskaga ilaashaan cadowga doonaya in magaalada laga qaoxo si ay dabeeto u bili-liqaystaan. Kuwaasi waa cadowga uugu wayn ee dadka reer Khaatumo ee ka foojignaada, qofka reer Laascoonood ah ee qaxayaa, xagee buu tagayaa, ma Garoowe, ma Boosaaso mise Hargeeysa mise Burco mise Boorame. Waar haddii la qaxo ma jiri doonaan: masaajido iyo goobo lagu cibaadeeysto, waxbarasho, dugsiyo iyo jaamacado, amni iyo booliis dadka kala haga, horumar, caafimaad, biyo nadiifi toona, sidaa awgeed, yaan kuw doonaya bili-liqado aaneey idiin tumin durbaan ay idinku dagayaan ee wada ilaashada danta maatadiina iyo shacabkiina wanaagsan!!